Tag: Macaamiil | Martech Zone
5 Sababood oo Suuqgeeyayaashu ay maalgashi dheeraad ah ugu sameynayaan barnaamijyada Daacadda Macaamiisha
Talaado, July 12, 2016 Jimco, Diisambar 15, 2017 Douglas Karr
CrowdTwist, oo ah xalka daacadnimada macaamiisha, iyo Brand Innovators waxay baaritaan ku sameeyeen 234 suuqleyda dijitaalka ah ee shirkadda Fortune 500 si ay u ogaadaan sida isdhexgalka macaamiisha u dhexgalo barnaamijyada daacadnimada. Waxay soo saareen macluumaadkan, Muuqaalka Muuqaalka Daacadnimada, sidaa darteed suuqleydu waxay baran karaan sida daacadnimadu ugu habboon tahay istiraatiijiyadda guud ee suuq-geynta ee urur. Kala bar dhamaan noocyadu waxay horeyba u heleen barnaamij rasmi ah halka 57% ay sheegeen inay kordhinayaan miisaaniyadooda sanadka 2017 Maxay Suuqyayaashu u maalgashanayaan inbadan Daacadnimada Macaamiisha
Faa'iidooyinka Barnaamijyada Daacadnimada Macaamiisha
Isniin, Janaayo 4, 2016 Jimco, Diisambar 15, 2017 Douglas Karr
Xitaa B2B, hay'addeenu waxay eegeysaa sida aan u siin karno macaamiisheenna qiime ka sarreeya waajibaadka qandaraaska ee naga saaran. Kaliya kuma filna in kaliya natiijooyinka la bixiyo mar dambe - shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay ka bataan waxyaabaha laga filayo. Haddii ganacsigaagu yahay macaamil ganacsi sare / dakhli hoose, barnaamijka daacadnimada macaamiisha ayaa gabi ahaanba lama huraan ah oo ay weheliso tikniyoolajiyadda lagu maareeyo. Waxaa jira 3.3 bilyan oo xubin ka ah barnaamijka daacadnimada Mareykanka, 29 qoyskiiba 71% macaamiisha barnaamijka daacadnimada waxay sameeyaan $ 100,000 ama ka badan
Ma jiraan wax yar oo ka mid ah shirkadaha u baahan in laga caawiyo beddelka macaamiisha. Dhamaanteen aad ayaan u mashquulsan nahay mar walbana waxaan ku fiicneyn soo saarida wax soo saar iyo adeegyo waa weyn, laakiin badiyaa waan ka gaabinaa bixinta waddo habsami leh oo horseed u noqota macaamiil Tiknoolajiyada suuqgeynta ayaa siisa aalado kala soocaya farqigaas iyo kobcinta hoggaamiyeyaashaas si hufan. Ingraphicgraphic-kaan laga soo qaaday ReachLocal, waxaad safar ku raaci doontaa hoggaanka iibka, illaa iyo inta laga helayo